DataNumen: Politikan'ny cookie
Inona ny mofomamy?
Ny cookie dia sombin-tsoratra kely alefan'ireo tranonkala amin'ny tranokala ary voatahiry ao amin'ny tobin'ny mpampiasa, izay mety ho solosaina manokana, telefaona finday, takelaka sns. Ireo rakitra ireo dia mamela ny tranonkala hahatadidy vaovao momba ny fitsidihanao, toy ny fiteny sy ny safidinao tianao, izay mety hanamora ny fitsidihanao manaraka sy hahatonga ny tranonkala ho ilaina kokoa aminao. Ny cookies dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranonkala.
Ahoana ny fampiasana cookies?
Amin'ny fitetezana an'ity tranonkala ity dia ekenao fa afaka mametraka cookies amin'ny masininao izahay ary ampahafantaro anay ireto fampahalalana manaraka ireto:
Fampahalalana statistika momba ny fampiasan'ny mpampiasa tranonkala.
Ny endrika fidirana amin'ny Internet amin'ny finday.
Fikarohana farany momba ny serivisy web sy serivisy fanaingoana angona.
Fampahalalana momba ny doka aseho amin'ny mpampiasa.
Fifandraisana data amin'ireo tamba-jotra sosialy ho an'ireo mpampiasa, miditra amin'ny Facebook na Twitter anao.
Karazana cookies ampiasaina
Mampiasa tempo roa ity tranonkala ityrary session cookies sy cookies maharitra. Ny cookies Session dia mitahiry fampahalalana fotsiny raha miditra amin'ny Internet ny mpampiasa sy ny cookies maharitra izay voatahiry ao amin'ny angona terminal mba hampiasaina sy hampiasaina mandritra ny fivoriana iray mahery.
Cookie teknika: ireo dia mamela ny mpampiasa hitety ny tranokala na ny rindranasa ary hampiasa ireo safidy na serivisy isan-karazany any. Ohatra, amin'ny fifehezana ny fifamoivoizana sy ny fifandraisana amin'ny angona, hahafantarana ny fotoam-pivoriana, fidirana amin'ny faritra voafetra amin'ny tranonkala sns.
Fanamboarana cookies: ireo dia mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny serivisy miaraka amina endri-javatra ankapobeny efa voafaritra ao amin'ny terminal anao, na ny famaritana nofaritan'ny mpampiasa. Ohatra, ny fiteny, ny karazan'n browser izay ahafahanao miditra amin'ny serivisy, ny famolavolana atiny voafantina.
Cookies fanadihadiana statistika: ireo dia mamela ny fanaraha-maso sy ny famakafakana ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny tranokala. Ny fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny cookies toy izany dia ampiasaina amin'ny fandrefesana ny asan'ny tranokala, tranokala na tranokala ary ny fanoritana ny fivezivezena ho an'ireo mpampiasa ireo tranonkala ireo, mba hanatsarana ny serivisy sy ny fampiasa ho an'ireo mpampiasa.
Cookies an'ny antoko fahatelo: Amin'ny pejin-tranonkala sasany dia azonao atao ny mametraka cookies an'ny antoko fahatelo mamela anao hitantana sy hanatsara ny serivisy atolotra. Ohatra, ny serivisy statistikan'ny Google Analytics.
Famonoana ny Cookies
Azonao atao ny manakana ny cookies amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fikirana ao amin'ny tranokala anao izay ahafahanao mandà ny fametrahana ny cookies rehetra na ny cookies sasany. Na izany aza, raha mampiasa ny fikirakirana nataonao ianao hanakanana ny cookies rehetra (ao anatin'izany ny cookies ilaina) dia mety tsy ho azonao idirana daholo na ny ampahany amin'ny tranokalanay na tranokala hafa vangianao.
Afa-tsy ny cookies tena ilaina, dia lany daty ny cookies rehetra aorian'ny fotoana iray.